Lesuutuu Keessatti Eega Hoogganaan Waraana Biyyattii Ajjeesamanii Yaaddoon Hammaataa Jira
Biyya Afrikaa gama Kibbaatti argamtu – Lesuutuu keessatti, jalqaba torban kanaa irra eega hoogganaan waraana biyyattii ajjeesamanii booda, yaaddoon daran hammaataa jira.
Hariiroon hoogganoota siyaasaa fi waraana gidduu jiru hammaachaa deemuunii fi hoogganichi waraanaa – Leetenant Jeneraal Kohaantil Motso-motso ajjeesamuun, biyyattiin fonqolcha mootummaan beekamtu kun haala hamaa keessa bu’uu malti – yaaddoo jedhu uumee jira – biyyoota ollaa biratti.
Kibxata dabre kana, qondaalota hidhatan tu waajira Jeneraal Motso-motsotti girrisee seenee ajjeese. Bara 2015 qondaala waraanaa ajjeesuutti kanneen shakkaman – hidhattoonni waraanaa ajjeechaa kana raaw’atan, walitti-dhukaasa achii booda geggeessameen battalumatti ajjeesaman.
Jaarmayaan gamtaa biyyoota naannoo – SADC – jedhamu, battalumatti haleellaa sana balaaleffate.
Ministarri Faransaay – Moketsii Maajooroo, kana ilaalchisuun ibsa kennaniin, “ajjeestonni sun, ajjeechaa ammaan dura bara 2015 geggeessame irratti qorannaa geggeessame irraa Jeneraalichi waan isaan oolchuu dhiiseef haaloo hahuuf kan ajjeechaa kana raaw’atan – natti fakkaata – jedhu. Fonqolcha mootummaa geggeessuuf ta’uu mala – yaada jedhu garuu, shakkiin ilaalan.